Batanidza Chivakwa uye Brand Chivakwa naSemalt
Chii chinonzi Link Chivakwa?
Kukosha kweChinzvimbo Kuvaka
Mashandisiro Aungaita Brand Kuvaka Strategies Kubatsira Chibatanidza Kuvaka
Iko kudikanwa kwekugadzira yakakwirira-mhando shanduro haina kumbobvira yakanyanya kukosha mukutanga webhusaiti yako sechiremera mune yako niche. Chivakwa chekubatanidza chiri kuwedzera zvakanyanya uye chakaomarara sezvo Google ichiramba ichigadziridza mitemo yayo, uye iri kuda kusanganiswa kwenzira dzakasiyana, mazano, uye maitiro kuti awane mhedzisiro.
Tarisa pane zvese internet uye iwe uchaona kuti yakasimba mabhendi ari kutonga webhu. Naizvozvo zvakakosha kuti iwe utange kuona dhizaini yekubatanidza seyakakosha chombo chekuisa mabhenefiti, asi panguva imwecheteyo ona brark senzira yekubatsira kuvaka yakakwirira-mhando shanduro. Kuziva uku kwatoita kuti vanhu vazhinji vataure kuti kuvaka dhizaini kwakanyanya kufanana nekuvakwa kwechigadzirwa. PaSemalt, tinoziva kuti chokwadi iyi misimboti miviri inoshanda pamwe chete kuti ikupe iwe kubudirira kwebhizinesi rese. ¬
Chii Chinonzi Chivakwa?
Chivakwa chekubatanidza ndiwo maitiro ekutora kana kutora ma hyperlink kubva kune mamwe mawebhusaiti pawebhusaiti kune yako saiti. Hyperlink (iyo inongodaidzwa seyuniti) ingori nzira yekufamba-famba pakati pemapeji pane internet.
Injini dzekutsvaga, seGoogle, shandisa zvinongedzo zvewebhu zvinokambaira - zvinokambaira zvinongedzo zviri pakati pemapeji akasiyana pane yako webhusaiti, uyezve zvinokambaira chero zvipi zviripo zviripo pakati pewebsite.
1. Inobatsira neyekutsvagisa injini yekutsvaga: Pane nzira mbiri dzinokosha idzo Google inoita yekushandisa zvinongedzo. Yekutanga ndeyekuwana mapeji matsva pawebhu uye yechipiri ndeyekuvabatsira kurongedza mapeji nenzira kwayo mukutsvaga kwavo.
Pese painenge ichitsvaga injini dzinotsvaga mapeji ewebhu, dzinogona kutora iwo mapeji emukati uye dzodziisa muma index ayo. Aya ndiwo maitiro avanogona kuona kuti peji rinosangana nehunhu hwavo hunodiwa uye rinofanirwa kuverengeka zvakanaka nekuda kwemashoko akakosha.
Zvemukati peji rako hazvisi izvo zvega zvinosarudza izvo zvinokupa iwe nzvimbo pane Google TOP 100 - Google inotarisisa huwandu hwehukama hunouya kune peji mubvunzo kubva kune mamwe mawebhusaiti uye kunaka kweaya masosi ekunze. Izvi zvinongoreva kuti une mukana wepamusoro wekumisikidzwa zviri nani mukutsvaga kwekutsvaga sewepamusoro-mhando webhusaiti yekubatanidza neyako.
Mazhinji ekutsvaga injini dzekushandisa akashusha nekunyanyisa kushandisa pfungwa iyi; saka, Google yakatanga kubhurawuza kunze kwemitemo yavo kudzora maitiro aya. Google yakamborova mawebhusaiti mazhinji ayo anogonesa kurongedza mapeji avo ewebhu nezvirango zvinotyisa zveGoogle. Kashoma iyo webhusaiti inogona kupora kubva kune dzakadai chirango. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti varidzi vewebhu vashandise pfungwa yeiyi yekuvakira dhizaini zvine mwero.
Nenzira imwechete iyo yakakwirira-mhando shanduro inogona kubatsira webhusaiti yako nekukupa iwe nzvimbo dzakanaka paGoogle TOP, zvakaderera-zvemhando zvinongedzo zvinogonawo kukanganisa nzvimbo yako pa TOP. Mamwe mawebhusaiti ari kukwikwidza angada kushandisa matema tema SEO mazano ekuunza iwe pasi kuti asimuke akadai semhedzisiro. Saka, iwe unoita zvakanaka kuti ugare wakasvinurira kuti udzivise zvisungo zvakadaro. PaSemalt , isu tinogara tichingwarira vatengi vedu.
2. Iyo inobatsira kuwedzera traffic yekuendesa: Zvinongedzo zvinokubatsira iwe kuwana yako yaunoda chinzvimbo paGoogle TOP asi unoziva kuti ivo vanokwanisa zvakare kutyaira traffic kune yako webhusaiti? Iyo yakakwirira-yemhando yekubatanidza kubva kune inowanzo shanyirwa webhusaiti inogona kuendesa traffic yavo kune yako saiti. Uye kana webhusaiti yavo iri iyo inoenderana nezvamuri kupa, pane mukana wepamusoro wekuti traffic yakagadzirwa kubva kune vanobatanidza yavo ichave iri kubhadhara vatengi.
Naizvozvo, kubatanidza kuvaka pamwe nemamwe masayiti hakusi kwekungove kwehuwandu hwemotokari dzavanogamuchira asi nezvekukodzera kwetraffic yavo kune izvo zvaunofanira kupa pane yako webhusaiti.
3. Iyo inobatsira kuvaka hukama: Kazhinji, kubatanidza kubatanidza kuchasanganisira kusvika kune akakodzera mablogiki uye masayiti mune yako niche. Nguva zhinji, urikusvikira kune avo vapesvedzero kuti vabatsire kusimudzira zvinhu zvako zvichangogadzirwa uye chikonzero chikuru ndechekuwana chinongedzo kubva kwavari icho Google chingatarise sechinhu chekumisikidza iwe kuti unyatsokufarira.
Iye zvino aside iyo SEO inobatsira, kusvika kune vanochinjisa mune yako indasitiri kunogona kukubatsira iwe kuvaka hurefu hwehukama navo izvo zvinosimudza zvakare yako nhanho yekuvimbika mumeso evatengi veindasitiri yako.
4. Inobatsira nekuvakwa mhando: Kana chinzvimbo chekubatanidza chikaitwa nemazvo, chinogona kubatsira kuti iwe uve chinzvimbo cheindasitiri nekuita kuti mhando yako iratidzike seimwe.
Kusika zvemukati ndeimwe yemhando dzakawanda dzekugadzira nzira dzinogona kubatsira kuti uratidze vangangove vatengi hunyanzvi hwako, hungakubatsira kuvaka brand yakasimba.
Ngatiti iwe unogadzira chidimbu chakanakisa chemukati uchishandisa data yakakodzera yakaunganidzwa kubva kune yako indasitiri uye ukaiburitsa online, mikana ndeyekuti mukurumbira wako muindasitiri yako unowedzera. Zvino kana iwe wasvikira kune vamwe vanhu vari muindasitiri yako kuti vawane zvigadzirwa, uri kuratidza hunyanzvi hwako uye panguva imwecheteyo uchiparadzira zvaunoda kune vateereri vakawandisa.
Nenzira imwechete iyo inobatanidza kuvaka iyo inogona kubatsira nekuvaka mhando, kunewo zvidhinha zvivakwa maitiro ayo anogona kushandiswa kubatsira kuvaka zvinoshanda zvinobatana. Ngationgororei mamwe matanho anoshandiswa nevachinjisi vechimisheni uye toona kuti vangashandiswa sei mukubatanidza link.
1. Kutanga, Unhu uye Kuenderana Nezvinhu Zvekudyidzana: Unhu hwezvako zvemukati uye nekudyidzana zvinogara zvichitaurira vako vangangove vatengi kunaka kwechokwadi zvigadzirwa kana masevhisi aunofanirwa kupa. Gara uine chokwadi chekuti unogara uri paunogona napo paunenge uchihodha zvinhu kana kupa hurukuro kune mamwe mawebhusayithi kana mablog. Paunonyanya kuendesa zvinowirirana, zvepakutanga uye zvemhando yezvakanaka, kusimba kwako kwemusika kunova. Uyewedzere kwechiremera iwe, izvo zvinowedzera organic iwe zvaunotanga kuburitsa.
2. Brand Positioning: Brand Strategist havambofurati vakatarisa vateereri chaivo. Nenzira imwecheteyo, mhando yeshoko rako remhando yakafanana nekukosha kune chaiyo mawebhusaiti uye zvinyorwa.
Chero iwe paunenge uri pane yekutsvaga chinongedzo yekushambadzira, gara uchizvibvunza kana zano richitakura mhando yako kunzvimbo chaiyo yaunoda kuti ibate mumusika wayo wainotengwa.
Chigadzirwa chako chakasarudzika kukosha chinofanirwa kugara chine nzvimbo mune zvese zvako zvemukati uye nekudyidzana online. Iwe unofanirwa kushandisa zvinongedzo semabhiriji kune vanhu vanofarira izvo brand yako inopa. Naizvozvo, tora zvinongedzo kubva kune mawebhusaiti ane vateereri vako uye zviite kuti zvive nyore kwavari kuti vakuwane.
Kiyi yekuwana zvinongedzo zvinonatsiridza rudzi rwekuziva uye yekutsvagisa injini yekutsvaga ndeyekuve nemhando dzemhando yekumaka mumawebhusaiti ane masimba.
3. Kuvaka hukama: Kukoka vezera veindasitiri kuti vapewo zvemukati webhusaiti yako uye kuitawo ivo zvakare iri sosi yakasimba kwazvo yekumaki yeinternet iyo inogona kukubatsira iwe kuvaka zvinongedzo. Kushamwaridzana kwako nedzimwe mhando dzakatendeka muindasitiri yako kunobatsira kuti utaridze kutendeka uye kuvimbika.
Nzira yakanaka yekuratidza kuwirirana kwako iri kuburikidza nezvawatumira kune vateereri vako. Saka, zvakakosha kuti ubvunze vezera rako kuti vaenzi vanyore pamablogi ako, semuenzaniso.
Iwe unogona zvakare kukumbira kuti vadzorerezve zvekare zvimwe zvezvinyorwa zvavo zvekare (izvo zvinoenderana nevateereri vako) pane yako saiti - uyezve, iwe unogona kupa vezera rako rombo rakafanana rekudzokorodza zvinyorwa zvako zvekare.
Imwe mukana weiyi kukunda-kuhwina zano ndeyekuti inosimbisa kuvimba kwese uye munyori wepodfolio webhusaiti. Imwe mukana wekufunga ndeyekuti sezvo izvo zvirimo zvichasimudzirwa pane ese mapato mapato, ivo vaviri vachawana organic zvinongedzo uye vatsva vatengi / vaverengi. Chigadzirwa chako chinowedzera kusimba mumeso evashanyi vako vatsva kana vachinge vaona kubatana pakati pako nezvimwe zvigadzirwa zvakavimbika.
4. Kutaurira nyaya: Iyi ndiyo imwe yedzidziso dzakasimba kwazvo pakuisa chiratidzo. Vese mabhurukwa makuru ane nyaya hombe dzakabatanidzwa kune avo zvigadzirwa uye vanhu vane mwoyo yakaoma kuti vataure nenyaya.
Kana iwe uine nyaya yakajeka inowirirana, zvichaita kuti zvive nyore kwauri kuti iwe pachako ubatanidze zvinongedzo uye mazwi akakosha mukutumira kwako mameseji uye izvi zvichakubatsira iwe kuzadzisa zvinzvimbo zvauri kutarisira kuGoogle TOP.
5. Kugadzira nhume dzemhando: Vanhu vanonyanya kuda kuvimba nevamwe vanhu kupfuura mhando yacho pachayo. Dzidza kugadzirisa chimiro chako nekupa kumeso kwachiri.
Vandudza vanhu vanozove varidzi vemireza yemhando yako pane yewebhu rese. Ivo vanozobatsira kutaurira nyaya yako, kuvaka kuziva uye kusimbisa yako yechiratidzo kuona pane inoita kunge isingaite nzira. Nhume idzi dzechigadzirwa dzinogadzira maranganiswa anozogadzira traffic yakawanda kune yako saiti uye zvakare kunatsiridza masitepisi ako paGoogle TOP.
Chivakwa chekubatanidza chinogona kukubatsira kuti ugadzire chimiro chakasimba uye chivakwa chechina chinogona zvakare kushandiswa kubatsira iwe kuvaka zvakanyanya zvakakwirira-zvemhando zvinongedzo. Chivakwa chekubatanidza uye chivakwa chechigadzirwa chakabatana zvakasimba kuti pfungwa dzazvo dzinogara dzichitenderera. Iwe haugone kuvaka yakavimbika mhando online pasina kubatanidza kuvaka uye zvinopesana. Semalt ine zvishandiso zvakanakisa muindasitiri kuti ikubatsire iwe nezvese zviviri kubatanidza kuvaka uye rudzi rwekuvaka chivakwa mukubudirira kwese kwebhizinesi rako.